Ì nwere ike inyere ndị ọzọ aka n’agbanyeghị afọ ndụ ha, obodo ha si na okpukpe ha na-ekpe?
Ọtụtụ ndị n’ụwa a chọsiri nri na ebe obibi ike. E nwekwara ndị nke e kwesịrị ime ka ha nwee olileanya na ihe ga-adị mma n’ọdịnihu. Olee otú mbọ anyị na-agba iji nyere ndị dị otú ahụ aka ga-esi eme ka ihe anyị dị Chineke mma, ya agọziekwa anyị?
“Onye na-emere onye ọ na-enweghị ka ọ hà ya amara na-agbazinye Jehova ihe, Ọ ga-akwụkwa onye ahụ ụgwọ ihe o mere.”​—ILU 19:17.
IHE INYERE MMADỤ AKA PỤTARA
Jizọs mere ihe atụ gbasara otu nwoke ndị ohi kụrụ ezigbo ihe ma hapụ ya chee na ọ nwụọla. (Luk 10:​29-37) Otu nwoke si obodo ọzọ hụrụ nwoke a e merụrụ ahụ́, ya akwụsị ma nyere ya aka. O nyeere nwoke a aka n’agbanyeghị na ọ bụ onye obodo ọzọ.
Nwoke obiọma ahụ, kechiri ọnyá ya, nyekwa ihe ndị a ga-eji na-elekọta ya. Ihe ọzọ o mere bụ na ọ kasiri ya obi ma mee ka o nweta onwe ya.
Olee ihe anyị nwere ike ịmụta n’ihe atụ ahụ Jizọs mere? Jizọs ji ihe atụ ahụ na-akụziri anyị na anyị kwesịrị ime ihe ọ bụla anyị nwere ike ime iji nyere ndị nọ ná mkpa aka. (Ilu 14:31) Akwụkwọ Nsọ kwuru na n’oge na-adịghị anya, Chineke ga-eme ka ahụhụ ndị mmadụ na-ata kwụsị, meekwa ka ndị mmadụ gharazie ịda ogbenye. Ma, anyị nwere ike ịna-eche otú Chineke ga-esi mee ya na mgbe ọ ga-eme ya. Isiokwu na-esonụ ga-atụle ihe ọma ndị Onye kere gị ga-emere gị n’ọdịnihụ.
Ọ DỊBEGHỊ MGBE CHINEKE HAPỤRỤ M
Ihe onye si Gambia kwaga na Yurop kọrọ
“Mgbe m kwatara na Yurop, enweghị m ihe ọ bụla, ma ọrụ, ma ego ma ebe m ga-ebi. Ihe ndị m mụtara n’Akwụkwọ Nsọ nyeere m aka ịmata otú m ga-esi na-edi nsogbu m, ịna-arụsị ọrụ ike, na ịna-enyere ndị ọzọ aka, kama ịna-arịọ ndị ọzọ ka ha na-enyere m aka. Ọ dịbeghị mgbe Chineke hapụrụ m, ọ na-enyekwara m aka.”
Ahụhụ Ndị Ụwa Na-atụ n’Ọnụ Na-ata Ọ̀ Na-emetụ Chineke n’Obi?
Chọpụta otú Chineke si egosi na ahụhụ ndị ụwa na-atụ n’ọnụ na-ata na-emetụ ya n’obi.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ihe Chineke Ga-emere Ndị Na-enyere Ndị Nọ ná Mkpa Aka
wp20 nke 3 p. 13